Xasan Al-turaabi Oo Ku Geeriyooday Magaalada Khartuum. – Calamada.com
Xasan Al-turaabi Oo Ku Geeriyooday Magaalada Khartuum.
Magaalada Al-khurduum ee caasimadda wadanka Suudaan waxaa ku geeriyooday Xasan Al-Turaabi oo ahaa Nin galangal kulahaa siyaasadda wadankaasi.
Al-turaabi oo 84 sana jir ahaa ayaa u geeriyooday xanuun shalay kusoo booday, Cumar Xasan Albashiir madaxweynaha Suudaan ayaa ku dhawaaqay sedax maalmood oo baroor diiq ah.
Alturaabi ayaa madax u ahaa Xisbiga Qaranka Shacbiga Suudaan wuxuu ahaa jaamici wax ku bartay wadanka Faransiiska sidoo kale wuxuu soo noqday wasiirada arrimaha dibadda iyo cadaaladda.
Sanaddii 1996 ayuu hoggaamiyay siyaasadda arrimaha dibadda Suudaan halka sanaddii 1988 ayuu noqday wasiirka cadaaladda inkastoo sanado badan uu xabsiga ku qaatay kadib markii uu mucaaraday xukuumadihii kala duwanaa ee suudaan soo maray.
Â Al-turaabi ayaa ku hadli jiray Afar Luqadood oo kala ah Carabi,Faransiis,Jarmal iyo English Jaamacadda Khurduum ayuu uga baxay kuliyadda xuquuda balse Jaamacadda Serpon ee magaalada Paris ayuu sanaddii 1964 ka dhameystay waxbarashadiisa darajada PHD.
Xasan Al-Turaabi oo sheegan jiray in uu yahay Mufakir islaami ah ayaa dhowr mar ku dhacay khaladaad diimeed isagoo ugefay qaar katirsan Anbiyadda allaah.
Sidoo kale wuxuu soo saaray Fataawaad murun badan dhaliyay isagoona wax ka sheegay Nabiyillaahi Ibraahim CS, Culimaaâ€™udiinka Suudaan ayaa si adag u raddiyay Xasan Alturaabi kadib markii uu ammaanay Salmaan Rush-di Ninkii Shiiciga ahaÂ ee Kitaabka Qurâ€™aanka Kariimka ku tilmaamay Aayadaha Sheydaanka.
Hoos ka Akhri khaladaadkii Diimeed ee Xasan Al-turaabi iyo Jawaab Celintii laba bixiyay
Next: Saraakiil Ka Tirsan Nabadsugida Oo Isku Dilay Degmada Cadale.